आफ्नो भाग्य आफैं बनाउन चाहनुहुन्छ ? चाहुनहुन्छ भने अपनाउनुस् यी चार सूत्र Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 06:47:44
जापानी समय : 10:02:44
Tag: आफ्नो भाग्य आफैं बनाउन चाहनुहुन्छ ? चाहुनहुन्छ भने अपनाउनुस् यी चार सूत्र
आफ्नो भाग्य आफैं बनाउन चाहनुहुन्छ ? चाहुनहुन्छ भने अपनाउनुस् यी चार सूत्र
Posted on December 21, 2018 December 21, 2018 by Yadav Devkota
हामीले देख्ने र सुन्ने गरेका छौं फलानो त कति भाग्यमानी, अनि मनमनै कल्पने गर्दछौं मेरो पनि त्यस्तै भाग्य भए । के भाग्य लेखेर ल्याइएको हुन्छ वा कर्मले मानिसलाई भाग्यमानी बनाउँछ भन्ने विषयमा विवाद नभए पनि धेरैलाई लाग्दछ मेरो लेखेकै यस्तै ! खासमा मानिस भाग्यमानी हुन उसको आफ्नै भूमिका हुन्छ ।
हाम्रो गाउँघरतिर एउटा भनाई निकै प्रचलित छ भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दूध दुहेर अट्दैन । भाग्यलाई कर्ममा जोडेर मात्रै मानिस भाग्यमानी बन्छ भन्ने यो कथनको अर्थ हो ।
खासमाा निधारमा लेखेकै भरमा कोही पनि सुखी वा दुखी हुँदैन, मानिसको आफ्नै कर्मले त्यहाँ पुर्याउने हो । कर्मको लेखा भनेर निचमार्नेको कर्म झन्झन् खराब हुँदै जान्छ ।
विश्वप्रख्यात मनोविज्ञ रिचर्ड वाइजमन मानिसहरूले राम्रो हुन् वा नराम्रो आफ्ना भाग्य आफै कोर्छन् भन्छन् । भाग्यको भूमिका र मानिसहरूको जीवनमा त्यसले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरिराखेका वाइजमनले त्यसलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान भनेका छन् जसले आफूलाई भाग्यमानी र भाग्यमानी नभएको ठान्नेहरूबिचको भिन्नता हेरिराखेको छ ।
उनको अहिलेसम्मको अध्ययनको निष्कर्ष भनेको भाग्य कुनै जादुयी क्षमता वा अप्रत्यासित नतिजा नभई यो हामी कसरी सोच्छौं र काम गर्छौं भन्ने हो ।
बिबिसिले सार्वजनिक गरेको आफूलाई भाग्यमानी र अभागी ठान्नेहरुबीचको अध्ययनबाट निकालिएको चार निष्कर्ष यस्तो छ-
आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने मानिसहरू सही समय पहिचान गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्छन् । जब उनीहरूले अगाडी नयाँ बाटो देख्छन्, खुसीसाथ त्यस बाटोमा हिंड्छन् ।
भाग्यले साथ नदिएको ठान्नेहरूका हकमा भने त्यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ । उनीहरू एउटै बाटोमा हुन्छन् । जसकै कारण अवसरहरू देखिए पनि उनीहरू त्यसको सदुपयोग गर्न डराउँछन् ।
२ अन्तरआत्मालाई सुन्नु
नयाँ अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि अन्तरआत्मालाई सुन्नुको अर्थ धेरै हुन्छ । भाग्यमानी मानिसहरू त्यसो गर्न धक मान्दैनन् । उनीहरूलाई केही कुरा ठिक लाग्यो भने त्यसमा ढुक्कैसँग विश्वास गरेर अगाडि बढ्छन् ।
अर्कोतर्फ आफूलाई भाग्यमानी नठान्नेहरू स्वभावैले धेरै गहिरिएर परिस्थितिको समीक्षा गर्छन् । जुन उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक भइदिन्छ । उनीहरूका काम सफल हुनका लागि धेरै समय लाग्छ र उनीहरूको सोचाई धेरै फलदायी समेत भएको पाइंदैन ।
आशावादी मानिसहरूका रूपमा हेरिने भाग्यमानीहरू आफ्ना हरेक काममा सफल भइने सोच्छन् । उनीहरू आफ्ना कामहरू राम्ररी हुने ठान्छन् र सोही धारणाले नै त्यो सजिलै पूरा भइदिए जस्तो हुन्छ ।
सधैभरी यसले काम गर्छ भन्ने छैन तर सकारात्मक सोचले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि गतिशील भइरहन भने सघाउँछ । यो गुणको प्रभाव यस्तो हुन्छ कि त्यसले अरू मानिसहरूलाई सहजै आकर्षित गर्छ। यसको विपरीत आफूलाई भाग्यमानी नठान्नेहरूमा भने निराशावादी सोच हावी भइदिन्छ । आफ्ना उदास शैलीका कारण मानिसहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पञ्छिन खोज्छन् ।
यस स्वभावको साँचो भनेको सकारात्मक रहनु हो । नराम्रा कुराहरू सबैको जीवनमा घट्छन् तर भाग्यमानी मानिसहरू यस्तै अनुभवले त्यस्ता परिवेशमा काबु पाउन सक्छन् र उनीहरू त्यस्तो परिस्थिति बुझेरै अगाडि बढ्छन् । यसले खराब समयलाई पनि राम्रोमा परीणत गर्छ ।
तर आफूलाई भाग्यमानी नठान्नेहरू ससाना नकारात्मक कुराबाटै चिन्तित हुन्छन् । उनीहरू भविष्य बेरङ्गको हुँदैछ भन्ने सोचेर पर्यत्न गर्नु नै बेकार रहेको ठान्छन् ।
कसरी बन्ने त भाग्यमानी ?
रिचर्ड वाइजमन भन्छन्, केही तरिका अपनाइयो भने जोकोही भाग्यमानी मानिस जसरी सोच्न र व्यवहार गर्न सक्छन् । त्योमध्ये एउटा भाग्य डायरी बनाउनु र आफूलाई भाग्यमानी सोच्न थाल्नु पनि हो । त्यो डायरीमा जेजस्तो भए पनि आफूमा घटेका सबैभन्दा सकारात्मक वा राम्रो कुरा के हो, त्यो लेख्नुहोस् । यसले नकारात्मकता हटाएर जीवनका सकारात्मक पक्षमा केन्द्रीत हुन सघाउँछ ।
हामीसँग हुने कतिपय घटना हाम्रो बसमा हुँदैनन् तर भाग्य डायरी बनाउँदा हामीले त्यस्ता अवस्थासँग कसरी जुझ्ने भन्ने सिक्छौं । तर त्यो रातारात भइहाल्ने कुरा होइन तर केही हप्तामै मानिसमा यसको सच्चा असर पर्न थाल्नेछ ।
Posted in जन सरोकारTagged आफ्नो भाग्य आफैं बनाउन चाहनुहुन्छ ? चाहुनहुन्छ भने अपनाउनुस् यी चार सूत्र